ကွဲထွက်နေတဲ့ဇာတ်ညွှန်းတစ်ခုကို အတူရိုက်ကူးကြမယ့် Kim Kyung Nam, Joy နဲ့ Ahn Eun Jin - Asia News Bar
ကွဲထွက်နေတဲ့ဇာတ်ညွှန်းတစ်ခုကို အတူရိုက်ကူးကြမယ့် Kim Kyung Nam, Joy နဲ့ Ahn Eun Jin
မင်းသား Kim Kyung Nam ဟာ Ahn Eun Jin, Red Velvet’s Joy တို့နဲ့အတူ JTBC ရဲ့ ဇာတ်လမ်းသစ် “Just One Person” (literal translation) မှာ ပါဝင်ရိုက်ကူးမယ့်အကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါပြီ။
September 1 ရက်နေ့ကပဲ Kim Kyung Nam ရဲ့ အေဂျင်စီဖြစ်တဲ့ JR Entertainment ကနေ “မတူညီတဲ့ဇာတ်ကောင်မျိုးကို ပုံဖော်ရိုက်ကူးရင်း သရုပ်ဆောင်ခြင်းကို တိုးတက်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ မင်းသား Kim Kyung Nam ဟာ JTBC ရဲ့ ဇာတ်လမ်းသစ် ‘Just One Person’ ကို လက်ခံရိုက်ကူးသွားတော့မှာပါ” လို့ ကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။
“Just One Person” ကတော့ ရင်ထဲနင့်နေအောင်ခံစားရမယ့် အချစ်ဇာတ်လမ်းမျိုးဖြစ်ပြီး ရောဂါနောက်ဆုံးအဆင့်ကို ခံစားနေရတဲ့ အမျိုးသမီး (၃) ယောက်အကြောင်းကို ရိုက်ကူးပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နာတာရှည်ဆေးရုံမှာတက်ရင်း သိကျွမ်းခဲ့ကြတဲ့ ဒီ (၃) ယောက်ဟာ မသေခင်မှာ လူဆိုးတစ်ယောက်ကို ရှင်းလင်းပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတဲ့နောက် ဆုံတွေ့လိုက်ရတဲ့သူဟာ (၃) ယောက်စလုံးရဲ့ဘဝမှာ တန်ဖိုးအရှိဆုံးလူသားတစ်ယောက် ဖြစ်နေတဲ့အခါ… ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်း ‌ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်မလား? လှည့်ကွက်၊ မြှုပ်ကွက်ပေါင်းများစွာကြောင့် မေတ္တာတရားတွေ ပေါက်ဖွားလာမလား? ဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသမီ Ahn Eun Jin ကတော့ – ခေါင်းမာပြီး စာနာစိတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့်ရောဂါသည် Pyo In Sook နေရာမှာ ပါဝင်ရိုက်ကူးဖို့ အစောကြီးကတည်းက အတည်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Joy ကတော့ အသက်ရှင်သန်ဖို့ အချိန်သိပ်မကျန်တော့တဲ့ နာမည်ကြီး Influencer Sung Mi Do အဖြစ် ပါဝင်ထားပါတယ်။
မင်းသား Kim Kyung Nam ကလည်းပဲ အဓိကဇာတ်လိုက်ဖြစ်တဲ့ Min Woo Chun အဖြစ်သရုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ ဒီဇာတ်ကောင်ကတော့ လျှို့ဝှက်လွန်းပြီး ခက်ခဲတဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေရတဲ့ ကြေးစားလူသတ်သမားဖြစ်ပါတယ်။ အခကြေးငွေယူပြီး လူသတ်ပေးရတဲ့သူတစ်‌ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်း ထက်မြက်တဲ့အရည်အချင်း၊ ဗီဇရှိသူလည်း ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။
နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကို စိတ်ဒဏ်ရာ ရနေသူဖြစ်ပြီး မ‌ဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝကြီးကို အတွေးမဲ့စွာနဲ့ လက်ခံဖြတ်သန်းရင်း Pyo In Sook နဲ့ဆုံတွေ့ပြီးနောက်မှာ ဘဝအတွက်အရေးပါဆုံးသူတွေဖြစ်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။ ဇာတ်ညွှန်းအရ မြှုပ်ကွက်တွေများစွာပါနေတဲ့ “Just One Person” ဇာတ်လမ်းကတော့ ၂၀၂၁ အတွင်းမှာ ပြသနိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
Next မန်နေဂျာသာ တစ်ရက်လောက်မရှိရင် BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်တွေ လုပ်ဖြစ်မယ့်အရာလေးများ »
Previous « ဂရင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်အဖွဲ့ရဲ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် Hall of Fame အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ BTS
‘12th Nataraj Awards’ မှာ ‘အကောင်းဆုံးဇာတ်လိုက်’ဆု အတွက် စကာတင်စာရင်းဝင် ထိုင်းအနုပညာရှင်များ
Korea မှာ 2000s ခေတ် fashion style ပြန်ခေတ်စားလာအောင် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ ဝတ်စားခဲ့တဲ့ Jennie
အထူးသံတမန်အဖြစ် ခန့်အပ်ပွဲကို တက်​ရောက်ပြီး သမ္မတ Moon Jae In နဲ့ ​တွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့ BTS